विश्वको नजरमा बेलायती राजकुमारको विवाह
बिहेको तयारी तीव्र भइरहंदा विश्व जगतले यसलाई अत्यन्त चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । बेलायती सेरेमोनियल राजसंस्था विश्वमै लोकप्रिय भएकाले पनि राजपरिवारका सदस्यको बिहेले विश्व ध्यान आकृष्ट गर्ने गरेको हो । विस्तृतमा...
केपी ओली नेतृत्वमा गठित सरकारबारे के भन्नुहुन्छ ?
सुशासन र समृद्धि ल्याउंछ भन्ने आशा छ
सुशासन र समृद्धि ल्याउला भन्ने आशै छैन
पहिलेकै सरकारहरु जस्तै हो, केहि फरक हुनेवाला छैन
FNJ UK 4th AGM
Empire Banqueting Hall, Aldershot
UKNFBF 6th MR UK NEPAL
Drama 'Bhimsen Thapa' show
Harrow Borough Football Club, Harrow
Earlsmead, Carlyon Avenue, South Harrow, HA2 8SS
Buddha jayanti Celebration @ Trafalgar Square
Inas Europ Regional Nepali Dance & Singing Competition
Asian Community Centre, Plumstead
White Hart lane, Plumstead, SE18 1DG
दुई डुङ्गामाथि डुब्नै लागेको गौरवशाली गोरखा इतिहास
माओवादी जनयुद्धबारे पूर्व प्रहरी अधिकृतद्धारा लिखित पुस्तक बेलायतबाट प्रकाशित
अब त मन फराकिलो पार्ने कि ?
आइतबार लण्डनमा हुने युरोपस्तरीय नेपाली नृत्य तथा गायन प्रतियोगिताको कस्तो छ तयारी ?
लण्डन म्याराथन यहि आइतबार, ४० हजार भन्दा धेरैले भाग लिदै
लण्डनको ग्रिनविच बरोमा नेपाली नयां वर्ष मनाइयो
तमु समाज युकेमा पांचौं अधिवेसनको तयारी
लण्डन । इंग्ल्याण्डमा प्लास्टिकका स्ट्र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ ।
बेलफास्टमा नेपाली नयाँ वर्षको कार्यक्रम भव्य
लन्डन । नेपाली नयाँ वर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा नर्दन आयरल्याण्डको बेलफास्टमा आयोजित शुभकामना साझ कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
यस वर्षको लण्डन म्याराथनमा ४० हजारभन्दा बढिले भाग लिदैछन् । जसमा विश्वकै किर्तिमानी धावकहरुदेखि सर्वसाधारणसम्मले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लण्डन म्याराथन दौडिने हजारौं धावकहरु महिनौंदेखि यसको तयारीमा जुटेका छन् ।
अहिलेसम्म बेलायतसहित नेदरल्याण्ड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, पोल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायतका देशहरुबाट प्रतियोगीहरु आउने पक्का भइसकेको छ । केहि प्राविधिक कारणले अरु एक / दुई मुलुकका प्रतियोगीहरुको कन्फर्म हुन बांकी छ ।
साहित्य चौतारी यूकेले सुरु गर्यो अनलाइन रेडियो सञ्चालन
आफ्ना साहित्यिक गतिविधीहरुलाई संसारभरका नेपाली साहत्यिप्रेमीहरुमाझ पुर्याउने उद्धेश्यले रेडियो सञ्चालनमा ल्याएको साहित्य चौतारी यूकेका संयोजक वासु शर्माले जानकारी दिए ।
यसरी हुंदैछ ट्राफल्गर स्क्वायरमा मनाइने बुद्धजयन्ती कार्यक्रमको तयारी
लण्डन । आउंदो मे ५ तारिखका दिन मध्य लण्डनको ट्राफल्गर स्क्वायरमा मनाइने बुद्धजयन्तीको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बेलायतबासी गीतकार मेन्याङ्बोको नयां गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
सुरेन्द्र इङ्नाम, केन्ट । बेलायतमा बस्दै आएका गीतकार दिलसिङ् मेन्याङ्बोको आगामी एल्बम 'दिलको सृजना” को पहिलो गीत ''कसले भन्छ खुशी छु म” बोलको गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
देशको दिर्घकालिन हितको लागि सबैको मन फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । कसैको मन दुखाएर वा कसैलाई टाढा बनाएर नेपालको समग्र विकास गर्न सम्भव छैन । अहिलेको विश्व्ब्यपीकरणको दुनियाँमा सानो दिल, संकुचित ब्यबहार र राष्ट्रप्रेमको नाराले नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।